Iifattoo zikaFern kunye nentsingiselo yazo | Ukuzoba
Iitattoo zikaFern, zilula kwaye zintle
Iitattoo zikaFern lolunye uhlobo olukhulu ukuba ufuna isityalo esahlukileyo kwi tattoo. kwaye, yona, inentsingiselo entle. Ukuba ufuna ukumka kwi-ya ezakudala iitattoo ze rose, iintyatyambo ze-lotus okanye ii-daisy, iiferns licebo elihle. Ukongeza, sinokulubandakanya olu hlobo lweetato ngaphakathi kolo didi lwe Iitattoos ezincinci esele sithethile kuyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye.
Kwaye ngaba uninzi lwabantu olugqiba ukwenza i-tattoo yefern, lukhetha umvambo omnyama, olula kwaye ulayishwe kancinci. Ngamafutshane, i-tattoo entle kwaye elula. Ukugqibelela kokubini amadoda nabafazi. Kodwa iyintoni intsingiselo yeetern tattoos? Njengoko besesitshilo ngaphambili, banentsingiselo entle eya kukukhuthaza ukuba ubambe enye kulusu lwakho. Okulandelayo siza kuthetha ngentsingiselo yezi zityalo zinomdla kwaye siza kukunika iimbono ezimbalwa ukukhuthaza kuyilo lwakho olulandelayo.
1 Iiferns, uhlobo olunomdla lwesityalo
2 Iintsingiselo zefern tattoos
2.1 Iintlanga kunye neentsomi
2.2 IiFern kumaxesha ama-Victorian
3 Izimvo zefern tattoo
3.1 Iitattoo zikaFern ngasemva
3.2 Ifern yesizwe
3.3 Ifern njengesibini
3.4 Ifeni elula esihlahleni
3.5 Ifern yokwenene
3.6 Ehamba nezinye izityalo
4 UFern kunye nehena
5 Iifoto zikaFern Tattoos
Iiferns, uhlobo olunomdla lwesityalo
IiFerns zibalasele ngokuba zezona ziluhlobo olukhethekileyo lwesityalo, ngaphandle kwembewu okanye iintyatyambo, ezizala ziidumba. Ii-spores zigcinwa kuhlobo lwesachelet, olubizwa ngokuba sori, kwicala elingaphambili lamagqabi esityalo. Xa ixesha lifika, emva kokuvuthwa, i-sori ivulekile kwaye ii-spores ziyakhululwa.
Zikhula kakhulu kwiindawo ezinomswakama kwaye kukho iintlobo ezininzi. Ezona zixhaphakileyo zinamakhonkco amile okwearha, nangona zikhona ezinamakhonkco amancinci kwaye nangaphandle kwawo, kodwa eneziqu ezimile njengesiphatho sevayolin. Zizityalo ezinamagqabi, ezikhula phantsi kwengca, zinemibala ukusuka kuluhlaza oluhlaza ukuya kwi-emerald enkulu.
Iintsingiselo zefern tattoos
UFern Unentsingiselo enkulu yomlingo kuxhomekeke kwinkcubeko ethandwayo. Njengokuba kunjalo nezinye izityalo ezifana ne-clover, i-fern ibonakaliswe iimpawu zokutsala inhlanhla kunye nobutyebi kuwo wonke umntu onayo. Ukongeza, i-ferns ekhaya yinto elungileyo kakhulu kuba kwiinkcubeko ezininzi bathi ibonelela ngamandla okhuseleko kokubini kwikhaya nakubantu abahlala kulo.
Iintlanga kunye neentsomi
Kukwacacisiwe ukuba Sisityalo esisetyenziswa zezinye izizwe ukulwa imimoya emdaka. Kwaye, kwinto endikwazileyo ukuyifunda, ifern sisityalo esitsala imvula, nangona kule nto ingothusi, kuba kufuneka ubone kuphela kwimimandla kwaye phantsi kwaziphi iimeko zezulu esi sityalo sifunyanwa.
IiFerns zinxulumene nenani elikhulu lamabali amaSlavic, phakathi kwezona zaziwayo, leyo Ibango lokuba ziyaqhakaza kuphela ngobona busuku bufutshane bonyaka. Intsomi ithi ukuba ufumana intyatyambo yefern (into enzima kakhulu, enyanisweni ayinakwenzeka!) Uya kuba nethamsanqa kubo bonke ubomi bakho.
Kwaye enye intsomi, ngeli xesha isiFinnish, ithi ukuba uyayifumana intyatyambo yefern uya kuba nakho ukungabonakali kwaye uhambe uye kwindawo apho ubutyebi bulindile ungqongwe zii-wisps...
IiFern kumaxesha ama-Victorian
Ekugqibeleni, Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba, ngexesha lama-Victorian, bekukho ifashoni enxulumene neeferns apho zonke iintlobo zezinto zazihonjisiwe (ukusuka kwiseramikhi, ukuya kumalaphu, ezincwadini nakwimifanekiso eqingqiweyo) olu hlobo lwesityalo, nokuba lolokwenyani, lomisiwe okanye luzotyiwe. Olu khokelo lukhokelele kufundo lwabo olunzulu kunye nemizekelo emihle kwimisebenzi enxulumene nolu hlobo lwesityalo.
Izimvo zefern tattoo
Ubuhle beeferns, kunye neendidi zazo, zinokusinika uninzi lweembono ukuze uyilo lwethu lube lolwahlukileyo kwaye luyintsusa. Nazi ezinye zeembono esinethemba lokuba uya kuzifumana ziluncedo:
Iitattoo zikaFern ngasemva
Umva yenye yezona ndawo zibalaseleyo apho unokufumana esinye sezi zityalo zihle kakhulu. Ijiyometri yeebhleyidi ijongeka ngathi ilungile ngasemvaUkongeza, ungadlala ngokuluhlaza okumnyama kwamagqabi kunye nobomvu obomvu wesiqu. Kwaye unokukhetha isitayile esinyanisekileyo, esifana nesifotweni, okanye ukhethe ukuchukumisa i-watercolor, emnyama nomhlophe ...
Kanjalo lolunye loludibaniso olunomdla onokulufumana. I-fern inokuba yodwa okanye ihambisane, nangona kubalulekile ukuba, ukuze isityalo sibonakale kwaye sibonakale, uyayithanda i-DJ esefotweni: hlula amagqabi nganye nganye, ugcine ubume bawo obunxantathu nobunxantathu.
Ngamanye amaxesha i-ferns ayingabo baphambili beetattoos, kodwa inokusetyenziswa njengegcisa lendwendwe. Ngaphantsi, ngenxa yemilo yabo, banokunika umdlalo omninzi nokuba banombala okanye abamnyama nabamhlophe, zizinto ezigqibeleleyo zokuxhasa isityalo osikhethileyo njengomntu ophambili.
Ifeni elula esihlahleni
Ngaba sele sitshilo ukuba imilo yeeferns ilungele umvambo? Ukulula kwayo kulungele iiTattoos ezinjengezo zikwisithombe. Zombini zinika imvakalelo epholileyo yobomi kunye nokuhamba. Khetha i-fern yeklasikhi okanye uye kwelinye elinamagqabi ajikeleziweyo kunye nesiqu somdiliya kutshintsho oluthile.
Ngaphandle kwamathandabuzo, inkosi ye-tern tattoos yeyona isekwe kuyilo olusisiseko lwesi sityalo. Nangona kunjalo, nokuba yinyani, musa ukuyikhuphela ngaphandle ukuyinika into eyahlukileyo yokwenza ubugcisa, umzekelo, ukuchukumisa i-watercolor okanye ukufiphala, njengaleyo ifoto. Unokuthatha ukukhuthazwa kwimizekelo yakudala yama-Victorian esithethe ngayo ngaphambili nge-antique touch.
Ehamba nezinye izityalo
Uyilo olwahluke kolo lwefern njengesibini esithethe ngayo ngaphambili kukuyidibanisa nezinye izityalo. Ke, kuyilo oluncinci oluncinci luyadityaniswa, kunye nokubaluleka okufanayo, kwindawo enye (kule meko, ingalo, nangona inokuba ngumlenze, intamo ...), njengamaqhekeza wepuzzle, ukuhambisa kakhulu ngobuhle banamhlanje nobuhle.
UFern kunye nehena
Asinakulibala malunga ne-henna ferns. Unokufumana i-tattoo ngokulandela le ndlela kwaye uphefumlelwe yiyo. Njengoko ubona, uyilo oluntsonkothileyo kunye nobuthathaka be-henna ujongeka umhle ngeferns, Kwaye vumela uyilo oluthile, olupholileyo kakhulu, into enzima ngakumbi kunye nesitayile esimangalisayo.
Siyathemba ukuba unomdla kwintsingiselo yeetern tattoos kwaye sikunike izimvo ezimbalwa zetattoo yakho elandelayo. Khawusixelele, unayo iitatoo zale ndlela? Ngaba zikho ozithandayo ngokukhethekileyo? Ngaba ucinga ukuba sinazo naziphi na izimvo? Khumbula ukuba ungasixelela into oyifunayo, ngenxa yoku, kufuneka usishiyele uluvo!
Iifoto zikaFern Tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo » Iitattoo zikaFern, zilula kwaye zintle
IiTato zeOlive zesebe, uphawu loxolo okanye uloyiso